Hagaajinta SEO-gaaga, Ka Akhri Sameey Image Optimization! - Khabiirka Cirka
On-page SEO iyo image optimization waa laba tallaabo oo hoose ee olole SEO ah oo wax ku ool ah. The search engine s helay caqli badan oo akhlaaq wakhti leh, iyo nidaamka helitaanka rikoorka raadinta wanaagsan waa mid aad u casri ah. Maqnaanshaha tayada kuma filna maadaama aad tahay inaad wax badan fiirsato. Waxyaabaha kala duwan ayaa ka qaybqaatay inay muujiyaan taxanaha mashiinka raadinta, arrinta ugu muhiimsanna waa habka aad ku hagaajinayso sawiradaada SEO.
Haddii bogga bogga ee SEO yahay tiirarka shabakadaada, muuqaalka muuqaalku waa dhismaha dhismaha. Jason Adler, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare Maamulaha Maareynta Macaamiilka, ayaa sheegaya in sawiradu ay yihiin qaybo muuqaal ah oo ka mid ah bogaggaaga internetka waxayna ka fiican yihiin qoraalka kumanaan erayga ah - antank battery pack. Waa muhiim inaad isticmaasho sawirada si habboon si ay ugu gudbin karaan farriintaada marka ugu horeysa ee la eego.
Xaqiiji in sawirada aad doorato ay ku haboontahay mawduucaaga internetka. Waxyaalo badan oo ka mid ah sawirrada aan ku habbooneyn waxay ku siinayaan natiijooyin wax ku ool ah oo SEO ah sida hal sawir leh qoraalka iyo sharaxaadda ku habboon.
Qodobbada hoose waxay ka ciyaaraan door muhiim ah si aad u aragto sawirkaaga. Waxay ka caawiyaan sawirradaada inay muujiyaan natiijooyinka natiijooyinka raadinta raadinta iyo wanaajinta waqtiga boggaaga. Dhamaan mashiinnada raadinta waxay ku xiran yihiin qoraalka sawiradaada maadaama ayan akhrin karin mawduucaaga, sidaas darteed qoraalka hoose iyo subaxda ayaa go'aan ka gaari doona sida sawiradaada looga saari karo natiijooyinka muuqaalka Google..Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loogu talagalay tagsiyada hoose waa in la ilaaliyo tags gaaban, sharaxaad iyo barta.
Sawirada iyo martigelinta:
Cabbirka sawirku wuxuu door weyn ka ciyaarayaa wanaajinta khibrada guud ee userka. Hubi in sawirada aad isticmaashid ayan ahayn mid aad u culus si kor loogu qaado xawaarahaaga. Isticmaal sawirro yaryar oo qurux badan oo sahlan oo muujinaya natiijooyinka raadinta raadinta. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho sawirada bytes. Qalabka sida Yahoo Smushit waxaa loo isticmaali karaa in la tirtiro boomaatada xad-dhaafka ah ee sawirada, iyaga oo ka dhigaya kuwo ka fudud sidii hore.
Sawirka martigelinta waa arrin kale oo muhiim ah marka ay timaaddo soo saarida taraafikado badan oo ka socda raadinta sawirka Google. Google iyo mashiinnada kale ee raadinta ayaa muhiimada ugu weyn siinaya sawirada ku yaala isla domain ka badan sawirada lagu soo bandhigay domains badan. Naqshad weyn oo loogu talagalay raadinta muuqaalka Google waa isku dhafka sawirrada leh qoraalka boggaaga.
Sida keydka muhiimka ah ee muhiimka ah ee ku jira URL-kaaga, fayliyayaasha ayaa muhiim u ah sawirradaada. Faahfaahinta hodanka ah ee muhiimka ah waxay caawineysaa matoorada raadinta qiimeeynta goobtaada si habboon. Waa inaadan isticmaalin magaca faylka caadiga ah, sida DSC0119.jpg, maadaama ayan bixinin macluumaad ku filan oo ku saabsan sawiradaada. Taa bedelkeeda, waa inaad isticmaashaa faahfaahinta sharaxaadda iyo ereyada muhiimka ah, taas oo ay tahay in lagu kala gooyo guntimaha.
Xiriirinta muuqaalka iyo cinwaanka cinwaanka:
Sawir waa rafcaan iyo wax indhahoocaya oo sharxaya boggaaga iyo content. Xiriirinta sawirka saxda ah waa hab waafaqsan SEO. Waa inaad iska ilaalisaa inaad toos ula xiriirto sawirradaada. Taa bedelkeeda, waa inaad ku dhejisaa sawirrada oo aad dib ugu noqotid bogaggaaga. Sidoo kale, waa inaad isticmaashaa sumadaha saxda ah ee saxda ah. Taariikhda cinwaanka waxay ku siinaysaa macluumaad ku saabsan mawduucaaga marka ay isticmaalayaashu ku dhejiyaan xarigahooda khadka. Waxaa muhiim ah in lagu daro sharaxaadda saaxiibtinimo ee saaxiibtinimo iyo keywords muhiim ah oo ku saabsan sumadaha title.